ILa Qosol | WWW.DARARWEYNE.TK
Category: ILa Qosol
anigu tan ayaan garanayaa
Filed under: Bogga Hore, ILa Qosol — Leave a comment
Nin ayaa wuxuu arkay koox dhallinyaro ah oo raashin meel ku wadaagaya (isla cunaya). Intuu ku soo leexday ayuu dhakiisa ka galay.
Nimankii kale way is fiirfiiriyeen iyagoo la yaaban ninkan aysan aqoon oo cuntada iska soo galay bilaa fasax.
Waxay ku yiraahdeen “saaxiib ma qof baad naga garanaysaa?”.
Maya ayuu yiri “laakiin tan ayaan is naqaan” intuu cuntadii la cunayey farta ku fiiqey!!
Waqti hore ayaa Madaxweeynihii Soomaaliya waxa uu booqday shiinaha kolkaasayuum waxa uu la kulmay madaxwaynaha shiinaha oo wiil u dhashay.markaas ayaa layidhi MR. madaxwayne waa inaad u magac bixisaa wiilka madax waynaha u dhashay Maxaweeynihii Soomaaliay talo ayaa ku cadaatay isagoo yaaban oo wax uu sameeyo garan la’ ayuu hindhisay HITISHOOOW!!!!!!HITISHOOW markaasaa ayaa lawada sacbiyay oo la yir magac fiican ayaad u bixisay wiilkan HITISHOOW waa magac qurux badan! sidaa ayaa wilkaasi loogu bixiyey Mr.HITISHOOW.
Attoruhu Hadduu Dhinto Lacagtu Waa Celis!!!
Magaalada Gaalkacyo maalintii intaad dhex socotid waxaad arkaysaa baabuur nooca xaajiya khamsiinta loo yaqaano oo korka ka saaran sameecado waaweyn iyo makarafoon.
Nin la yiraahod Ilbir ayaana ka dhex qaylinaya makarafoonka isagoo ka hadlaya ama xayeesiin ku sameynaya filinka caawa socda.
Filinka haduu yahay Hindi Mr. Ilbir sidan ayuu u xayeesiinayaa: “Waa filin cusub waxaa idiin wada gabadhii wajiga barta ku lahayd iyo inankii dheeraa ee tinta jilicsanaa. Filinka wuxuu leeyahay Shan feer iyo todoba hees yuusan ku dhaafin. Ninkuu dhaafaa waa eey eey dhalay naagtuu dhaafaana waa doofaardoofaar dhashay. Atooruhu haduu dhintu lacagtaadu waa celis!”.
Haduu yahay kuwa jabaanka loo yaqaan: “Waa filinkii laga dabadhacay atirisho kuma jirto. Atooruhu waa bisada ceegada ku dilay waana nin waalan baabuurka iyo baaskiilka iskusi ayuu uwadaa”
Haduu yahay kuwa loo yaqaan Maraykanka: “Waa filin cusub xodxodashadu way ku yar tahay kufsiga dhaca iyo boobka ayaa ku badan. ninkii laga waayaa caawa filinkan waa eey eey dhalay”.
Markaad shineemda gashid halkii laws iyo nacnac iyo wax la mid ah lagu dhex iibin lahaa laba nin ayaa kusoo agmaraysa nina baaldi ayuu caano geel kuwadaa nina baaf hilib nimankaas oo ku dhawaaqaya cad iyo caano cad iyo caano..
Marka la gaaro waqtiga uu soo galayo BBC Laanta Af Soomaaliga filinka waa la joojinayaa , waxaana la dhageeysanayaa BBCda .Hadaad rabto bax hadaad rabto joog waa qasab in aad dhageeysato !!!
Madaxweeynaha Mareykanka , Ruushka Iyo Soomaaliya … !!!
Madaxweyna kasta wuxuu sheegay in uu joogo waddankiisa markii ay diyaaradda dul mareysay. Haddaba waxaa la weydiiyay sida ay ku garteen. Madaxweynaha Mareykanka ayaa yiri : Anigu waxaa gacanta ka bixiyey daaqadda(Shubaakada)diyaarada markaas ayaan taabtay daarihii New York sidaa ayaan ku gartay in aan joogo Mareykanka . Madaxweynihii Ruushka ayaa isagana yiri:Anigu markaan gacanta daaqadda ka bixiyey waxaan dareemay qabowga Mosco sidaa ayaan ku gartay in aan joogo Ruushka, Madaxweynihii Soomaaliya ayaa isagana yiri: Anigu markaan gacanta ka bixiyey daaqadda waxaa leyga furtay Saacaddii aaan watay sidaa ayaan ku gartay in aan joogo waddankeyga Soomaaliya.
ilaahey caadilsanaa waaba ka caasha abuurey
Ninbey gabadhiisu aad u kulayleed, ninkaasi waxa uu isku dayey in uu gabadhaasi uu dajiyo, sifiicanna uwada dhaqmaan si ey familygu burbur iyo fawdo uga badbaado, oo ubadku ayna udayacmin
markii u danbeysey ee uu ka quustey ucaqli celinteedii ayaa waxa uu yidhi ilaahey caadilsanaa waaba ka caasha abuurey — cimrigaaga adhaxda laga jebi — caashey coomaado — cagaha ayuu wax kadayey dibna odeygii looma arag